Farmaajo oo hakiyay lacag loogu tala-galay maamul goboleedyada | Keydmedia
Farmaajo oo hakiyay lacag loogu tala-galay maamul goboleedyada
Lacagtaan kabka Miisaaniyadda ah oo gaareyso 70 Milyan oo dollar ayaa waxaa dhawaan shir ka dhacay Muqdisho ku kala qeybsaday Wasaaradaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir iyo Somaliland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu hakiyay lacagtii kabka Miisaaniyadda aheyd ee ka timid Bankiga Adduunka ee loogu tala galay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, gobolka Banaadir, iyo Somaliland.
Lacagtaan kabka Miisaaniyadda ah oo gaareyso 70 Milyan oo dollar ayaa waxaa dhawaan shir ka dhacay Muqdisho ku kala qeybsaday Wasaaradaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ilaa iyo haddana lama oga sababta ka dambeyso in uu Farmaajo is hor istaago.
Maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland iyo gobolka Banaadir ayaa min 3 Milyan oo dooler saami ahaan u helay lacagtaan, halka Galmudugna la siiyay 4 Milyan, waxaana xusid mudan in Puntland ay ku soo aadday 9 Miyan oo dooller.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa kab Miisaaniyadeedka Bankiga addoonka ku deeqay ka heshay 19 Milyan oo dooller, halka Somaliland loo qoondeeyay 11 Milyan, waxaana xusid mudan in isticmaalka lacagtaan uu Bankiga shuruud ku xiray, iyadoona dowladda iyo dowlad goboleedyada laga rabo xisaab hufan.
Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeyso sababta uu Farmaajo u hor istaagay lacagtaan, haseyeeshee waxaa jira dagaal dhinaca siyaasadda ah oo u dhaxeeyo madaxweynaha iyo qaar ka tirsan madaxda maamulada dalka.